Nagarik News - निन्दनीय संवेदनहीनता
होमपेज / खेल / विचार / निन्दनीय संवेदनहीनता
निन्दनीय संवेदनहीनता	19 Nov 2015 बिहीबार ३ मंसिर, २०७२
केडिया मुक्तिको पाठ महत्वाकांक्षी बजेट! गणतन्त्रको गन्तव्य सकसमा सवारी 'मादल किन्न' सांसद कोष नाकाबन्दी टुंगिने लक्षण अभैm देखिएको छैन । देशभर र विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा जनजीवन निकै कष्टकर भइसकेको छ । सम्भवतः काठमाडौं उपत्यकाको जनजीवन सबैभन्दा धेरै असहज भएको छ । सरकारले अहिलेसम्म सबै ध्यान इन्धनको आपूर्तिमा लगाए पनि कुशल वितरण व्यवस्थाको अभावका कारण खासै सहयोग पुगेको छैन । नेपाली जनताले यसपटकको अभावलाई 'राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न' ठानेकाले जति नै अप्ठेरो पनि त्यसलाई सहने धैर्य देखाएका छन् । तर, अव्यवस्था लामो समयसम्म कायम रहे जनताको धैर्य टुट्न सक्छ । इन्धनको अभावसँगै महँगी पनि निकै बढेको छ । अभाव र महँगी दुवैको मार सहन निश्चित आय हुने र दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नेहरूका लागि निकै कष्टकर भइसकेको छ । अस्पतालहरूमा अत्यावश्यक जीवनदायिनी औषधि र उपकरणको समेत अभाव भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलका नेताहरू वार्ताप्रति गम्भीर नहुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण र आपत्तिजनक हो ।मधेसी दलका नेताहरू संसद्मा उपस्थित भइसकेपछि नाकाबन्दी गरेर जनतालाई थिलथिलो बनाउन प्रवृत्त हुनुको रहस्य बुझ्न निकै कठिन भएको छ । अघोषित कुनै दुराशय नभए मधेसी दलका नेताले मधेसकै बालबालिकाको भविष्यप्रति मधेसी नेता यति संवेदनहीन हुनु नपर्ने हो । यस्तै भूकम्पले थिलथिलो पारेको क्षेत्रका जनतालाई सरकारी उदासीनताले लगाएको घाउमा मधेसी नेताको नाकाबन्दीले नुकचुक छरेको छ । तैपनि, राजनीतिक दलका नेताहरू भने अत्यन्त गैरजिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । सरकारका मन्त्रीहरूले समस्या टुंगिने हैन देश विभाजन गर्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् । संसद्मा एक तिहाइभन्दा बढी सदस्य संख्या भएको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू उत्तिकै गैरजिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत भएका छन् । मानवीय संकटमा पर्न लागेको देशका राजनीतिक नेताहरूले अहम् त्ुष्टिको राजनीति गर्नुभन्दा दुर्भाग्य अरू के हुनसक्छ ? जनतामा असन्तोषको आगो दन्कनुभन्दा पहिले राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर भएनन् भने त्यसको परिणाम निकै भयावह हुनसक्छ ।सरकार पक्कै पनि अरूभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिन बन्द गर्नुपर्छ । प्रमुख विपक्षीबिना संविधान संशोधन हुननसक्ने हुनाले कांग्रेसलाई किनाराको साक्षी राख्ने हैन संवादको मियो बनाउन सरकार तयार हुनुपर्छ र कांग्रेसले पनि त्यस्तो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । मधेसी दलका नेताहरूले पनि जनताका नाममा जनतालाई नै सास्ती दिने कार्यशैली नछाड्ने हो भने अहिले प्राप्त हुनसक्ने उपलब्धि पनि गुम्नेछ । राजनीतिक संयन्त्रजस्ता गैरसंवैधानिक माध्यमबाट अनौपचारिक प्रयाससम्म हुनसक्छ तर आधिकारिक निर्णय त संसद्ले नै गर्नुपर्छ । यसैले मधेसी दलसमेतको सहभागिता हुने गरी तत्काल संसदीय समिति बनाएर वार्ता अगाडि बढाउनु आवश्यक र उपयुक्त देखिन्छ । वार्ताप्रति अहिले देखिएको निन्दनीय गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य होस् । Tweet प्रतिक्रिया